December 31, 2020 goodmamLeaveaComment on जमेको कानेगुजीलाई निकाल्न चाहानुहुन्छ ? यो विधि अपनाउनुहोस् सुन्ने शक्ति बढ्छ दुई गुण !
यसले कान संक्रमणको खतरा पनि छ। अधिक फोहोरका कारण, हामीलाई सुन्न पनि गाह्रो हुन्छ र कहिलेकाँही असहनीय पीडा महसुस हुन्छ। यदि तपाईले लामो समय सम्म आफ्नो कान सफा गर्नु भएन भने कान दुख्न थाल्छ साथै कम सुनाइदिन्छ पनि त्यसैले आज हामी तपाईलाई आफ्नो कान सफा गर्ने सजिलो घरेलु उपचारहरुको बारेमा बताउँछौं। यी विधिहरू प्रयोग गरेर धेरै पैसा खर्च नगरी तपाईं आफ्ना कानहरू सफा गर्न सक्नुहुनेछ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
कानको फोहोर पनि जैतुनको तेलले हटाउन सकिन्छ। यसको लागि, तपाईंले रातमा कानमा जैतून तेलको केही थोपा हाल्नुहोस्। करीव ३ देखि ४ दिन सम्म यो गर्नाले कानको कानेगुजी नरम हुनेछ र कानेगुजी सजीलै बाहिर आउँनेछ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,